Tongasoa eto amin'ny fitsidihana anay ao amin'ny booth No. 5A26-1
Tongasoa eto hitsidika anay ao amin'ny booth No. 5A26-1 Hankany amin'ny fampirantiana izao tontolo izao valizy ao Dusseldorf Alemana isika amin'ny 27-29 Novambra. Tongasoa eto amin'ny fitsidihana anay ao amin'ny booth No. 5A26-1. Hanatrika ny fampirantiana izao tontolo izao valizy eto Dusseldorf Alemana isika amin'ny 27-29 Novambra. Tongasoa eto hitsidika anay amin'ny boot ...
Tongasoa namana hitsidika anay!
Future Valve Ball Co., Ltd, natsangana tamin'ny 2004, ny orinasa dia manana traikefa miavaka mihoatra ny 10 taona amin'ny famokarana BOLA sy seza avo lenta ary fizarana hafa ho an'ny valves Ball. Ny fikirizana sy ny fanamoriana manokana dia manao orinasa ampy fitaovana sy voadinika tsara. Voamarina amin'ny ISO9 ...
Fampirantiana solika, lasantsy, fanadiovana ary petrochemical
Hanatrika ny fampirantiana momba ny solika Iraisam-pirenena momba ny solika, gazy, fanadiovana ary ny petrochemical 22th Iran isika manomboka amin'ny 6- 9 Mey 2017. Tongasoa eto hitsidika anay ao amin'ny Hall 38, 1638. Momba ny fampirantiana Ilay mpamokatra OPEC faharoa lehibe indrindra, Iran dia mipetraka eo an-tampon'ny 11 isan-jaton'ny solika sy 18 isan-jaton'ny tahirin-tsolika manerantany. Isan-taona, ny ...
Hanatrika PCVExpo 2016 Moskoa ny orinasa
Ny PCV Expo dia varotra varotra iraisam-pirenena ho an'ny paompy, compresseur ary valves. Ity foara ity dia sehatra fampahalalana manan-danja manodidina ny olan'ny fitaovana pneumatika, valves, motera ary motera. Manamboatra ao amin'ny Expo PCV ny mpamokatra iraisam-pirenena farany ao amin'ny ...